News - Sidee loo doortaa alaabada ku jirta bacda baakadaha cuntada la habeeyey?
Sida loo doorto maaddada bacda baakadaha cuntada la habeeyay？
Guud ahaan, mabaadi'da soo socota ayaa lagu dabaqayaa xulashada qalabka baakadaha cuntada.
Sababtoo ah cunnadu waxay leedahay darajooyin sare, dhexdhexaad iyo hoose iyadoo kuxiran baaxadda iyo goobta isticmaalka, fasalada kala duwan ee agabka ama naqshadaha waa in lagu xushaa iyadoo loo eegayo heerarka kaladuwan ee cuntada.
Sababtoo ah noocyada iyo astaamaha cuntooyinka, waxay u baahan yihiin shaqooyin kala duwan oo ilaalin ah. Qalabka wax lagu rakibo waa in loo xusho si ay ugu habboonaadaan astaamaha kala duwan ee cuntooyinka kala duwan iyo xaaladaha wareegga kala duwan. Tusaale ahaan, qalabka wax lagu rakibo ee loogu talagalay cuntada sanka laga buufiyo waxay u baahan yihiin wax qabad hawo sare leh, halka baakadaha ukunta loo baahan yahay inay noqdaan kuwo naxdin u leh qaadista. Cuntada nadiifka ah ee la nadiifiyay waa in laga sameeyaa maaddooyinka heerkulka sare u adkaysta, iyo cuntada qaboojiyaha leh ee qaboojiyaha leh waa in laga sameeyaa qalabka baakadaha ee heerkulka hooseeya. hababka wareejinta iyo xiriiriyeyaasha (oo ay ku jiraan wareejinta) xulashada qalabka baakadaha. Astaamaha cuntada waxay u baahan yihiin qoyaan, cadaadis, iftiin, ur, caaryaar iwm gaadiidka (dadka, gawaarida, maraakiibta, diyaaradaha, iwm.) iyo xaaladaha waddooyinka. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo shuruudaha kala duwan ee dalal, jinsiyado iyo gobollo kala duwan oo loogu talagalay baakadaha si ay ula qabsadaan aqbalaadda suuqa iyo macaamiisha.
Qalabka wax lagu rakibo sidoo kale waa inay tixgeliyaan dhaqaalahooda. Markaad tixgeliso astaamaha, tayada iyo darajada cuntada la doonayo in la baakadeeyo, naqshadeynta, wax soo saarka iyo xayeysiinta ayaa loo tixgelin doonaa si loo gaaro qiimaha ugu hooseeya. Qiimaha alaabada baakiddu kaliya kuma xirna qiimaha iibka suuqa, laakiin sidoo kale waxay la xiriirtaa kharashka ka baaraandegidda iyo wareegga wareegga. Sidaa darteed, arrimo kala duwan waa in loo tixgeliyaa inay doortaan waxyaabaha ugu habboon xulashada naqshadeynta baakadaha.
4. mabda'a isuduwidda
Qalabka wax lagu rakibo waxay leeyihiin doorarro kala duwan iyo macnayaal kala duwan oo isugu jira xirxirida isla cuntada. Marka loo eego goobta ay ku taal, baakadaha wax soo saarka ayaa loo qaybin karaa baakado gudaha ah, baakado dhexdhexaad ah iyo baakado dibedda ah. Baakadaha dibedda ayaa inta badan matalaya sawirka badeecada la iibinayo iyo baakadaha guud ee shelf. Baakadaha gudaha ku jira waa xirmada si toos ah ula xiriirta cuntada. Baakadaha u dhexeeya baakadaha gudaha iyo baakadaha dibedda ayaa ah baakadaha dhexe. Baakadaha gudaha waxay isticmaalaan qalabka baakadaha jilicsan, sida qalabka jilicsan ee caagga ah, warqad, aluminium iyo walxaha isku dhafan ee isku dhafan; Waxyaabaha wax lagu kaydiyo ee leh guryaha keydka waxaa loo isticmaalaa baakadaha dhexe； Baakadaha dibedda waxaa lagu doortaa iyadoo loo eegayo guryaha cuntada, inta badan kartoonada ama kartoonada. Waxay u baahan tahay falanqeyn dhameystiran si loo gaaro shuruudaha shaqeynta iyo kharashyada dhaqaalaha si ay isugu ekaadaan iskuna duwo doorka qalabka baakadaha cuntada iyo baakadaha.
Markaad dooranaysid alaabada baakadaha, waxaan u baahannahay inaan tixgelinno in baakadaha cuntada ee loogu talagalay qalabkan ay si fiican u iibin karaan. Tani waa mabda 'bilic leh, dhab ahaantii isku dhafan oo farshaxan iyo muuqaal baakado ah. Midabka, cufnaanta, daahfurnaanta, qallafsanaanta, jilicsanaanta iyo qurxinta dusha sare ee qalabka baakadaha ayaa ka kooban farshaxanimada qalabka baakadaha. Qalabka baakadaha ee muujiya awoodda farshaxanka waa warqad, caag, galaas, biraha iyo dhoobada, iwm.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga soo saaro walxaha iyadoo loo eegayo suuqa, shaqada iyo cunsuriyada cunsuriyada si loogu doorto agabyada baakadaha si cilmiyaysan. Xulashada qalabka baakadaha cuntada waa inay ku saleysnaataa shuruudaha ka baaraandegidda iyo xaaladaha qalabka wax lagu farsameeyo, waxayna ka bilaabmaysaa sayniska iyo dhaqanka. Waxyaabo badan waa in la tixgeliyaa, oo ay ku jiraan astaamaha cilmu-nafsiga macaamiisha iyo baahida suuqa, shuruudaha ilaalinta deegaanka, qiimaha iyo qancinta shaqada, tikniyoolajiyadda cusub iyo dhaqdhaqaaqa suuqa, iwm.
Mabaadi'da is-dhexgalka ee farsamooyinka baakadaha iyo qaababka
Cunto la siinayo, farsamada baakada ugu habboon waa in la adeegsadaa ka dib xulashada qalabka baakadaha ku habboon iyo weelasha. Xulashada tiknoolajiyada baakadaha waxay si dhow ula xiriirtaa qalabka wax lagu duubo iyo meelaynta suuqa ee cuntada baakadeysan. Isla cuntada badanaa waxay isticmaali kartaa teknoolojiyada baakadaha kala duwan si loo gaaro shaqooyin baako la mid ah iyo saameyn, laakiin qiimaha baakaduhu wuu kala duwanaan doonaa. Sidaa darteed, mararka qaarkood, waa lagama maarmaan in la isku daro qalabka wax lagu duubo iyo tiknoolajiyada wax lagu duubo si loo gaaro shuruudaha baakadaha iyo natiijooyinka naqshadeynta.
Intaa waxaa dheer, qaabeynta iyo xulashada qalabka baakadaha cuntada waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la tixraacayo agabyada cuntada ee jira ama horay loo isticmaalay ee leh astaamo isku mid ah ama cuntooyin la mid ah.